करिब ३४ प्रतिशत बढ्यो कारोबार रकम - Naya Patrika
करिब ३४ प्रतिशत बढ्यो कारोबार रकम
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १९ माघ | माघ १९, २०७४
साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक बढेको छ । नेप्से बढेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिनको कारोबार रकम ३३ दशलमव ८९ प्रतिशत बढेको छ । दोस्रो त्रैमासमा सूचीकृत कम्पनीहरूले गरेको नाफाका कारण बजारमा केही सुधार भएको हो । तरलता अभाव र अधिक सेयर आपूर्तिका कारण बजार प्रभावित भइरहेको छ । बजार सुस्त गतिमा अगाडि बढेका कारण लगानीकर्ताहरू लगानीको रणनीति बनाउन सकिरहेको छैनन् । केही लगानीकर्ताहरू बजारले गति लिने अपेक्षामा बसिरहेका छन् । बजारले गति लिए नयाँ लगानीकर्ता पनि प्रवेश गर्नेछन् । यसले बजार बढाउन थप टेवा पुग्नेछ । नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आउनुलाई बजार सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्ने संकेत मान्न सकिने एक ब्रोकरको भनाइ छ । केही लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेका छन् । बजारले गति लिए लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न उत्साहित हुने उनको भनाइ छ ।
बिहीबार नेप्सेमा १ सय ५७ कम्पनीहरूको ४ हजार १ सय ५६ पटकको कारोबारमा रू. ४१ करोड ७० लाख ९८ हजार ६ सय ४३ बराबरको ११ लाख ५६ हजार ३ सय ६० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति अघिल्लो दिनको तुलनामा रू. ८ अर्ब २२ करोड बढेर रू. १६ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ४२ दशमलव २४ स्केलमा रहेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन १ दशमलव ५० अंक बढेर २ सय ९८ दशमलव १२ बिन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल बैंक लिमिटेड अगाडि रहेको छ । यस दिन सो बैंकको रू. ४ करोड २७ लाखभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । लक्ष्मी बैंकको यस दिन रू. ३ करोड ३४ लाखबराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको सेयर मूल्य यस दिन ९ दशमलव ४५ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, रिलायबल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य ५ दशमलव ४८ प्रतिशत बढेको छ । यस दिन कारोबारमा आएका १ सय ५७ कम्पनीमध्ये ४२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने ८८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । बाँकी २७ कम्पनीको सेयर मूल्य भने यस दिन स्थिर रहेको छ ।
बिहीबार जलविद्युत् समूहको परिसूचकबाहेक अरू सबै समूहको परिसूचक बढेको छ । यस दिन ‘अन्य’ समूहको परिसूचक सर्वाधिक १ दशमलव ३१ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, ट्रेडिङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव ७४ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत, बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत, होटेल समूहको शून्य दशमलव २६ प्रतिशत, बिमा र उत्पादनमूलक समूहको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत र वित्त समूहको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएको जलविद्युत् समूहको परिसूचक भने शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत घटेको छ ।
सिटिजन्स म्युचुअल फन्डको म्याद थप
सिटिजन्स म्युचुअल फन्डले प्रतिइकाइ रू. १० मा निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको १० करोड इकाइमा आवेदन दिने म्याद थप गरेको छ । यस योजनामा अब फागुन ३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यस योजनाले माघ १७ गतेसम्मका लागि इकाइ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको थियो । निष्कासित इकाइमध्ये कुल बिक्री भएको इकाइको न्यूनतम १५ प्रतिशत इकाइकोष प्रवद्र्धक सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई सुरक्षित गरिएको छ । यस योजनाको व्यवस्थापक सिबिआइएल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
एनसिसीको संस्थापक सेयर लिलाम बिक्रीमा
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकले ७० लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकका केही संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न आवेदन दिएका कारण सो सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । सो सेयर खरिदका लागि माघ १० गतेदेखि फागुन ३ गतेसम्म सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न सकिनेछ । सेयरको प्रतिकित्ता न्यूनतम मूल्य रू. २ सय १० तोकिएको छ । सो सेयरका लागि बोलपत्र पेस गर्दा रू. २ सय १० वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम एक सय कित्ता सेयरका लागि बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धक सिबिआइएल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
पञ्चकन्या माईले थप्यो आइपिओमा आवेदन दिने म्याद
पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडले आइपिओमा आवेदन दिने म्याद थप गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रू. १ सय अंकित मूल्यका ११ लाख कित्ता साधारण सेयर इलाम जिल्लाका आयोजनाप्रभावित क्षेत्र सन्दकपुर गाउँपालिका र इलाम नगरपालिकाका बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरेको थियो । माघ ५ गतेदेखि निष्कासन खुला गरिएको सो आइपिओमा अब माघ २३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भएको छ । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सन्राइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
सहयोगीको नगद लाभांश खातामा
सहयोगी विकास बैंक लिमिटेडले ४ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश (बोनस सेयर तथा नगद लाभांशमा लाग्ने करसहित) बैंक खातामा जम्मा गरेको छ । बैंकले मंसिर २७ गतेसम्म हितग्राही खातामा बैंक खाता अद्यावधिक भई रुजु भएका सेयरधनीहरूको बैंक खातामा सो लाभांश जम्मा गरेको हो । अन्य सेयरधनीलाई बैंकले निक्षेप सदस्यमा सम्पर्क गरी विवरण सच्याउन अनुरोध गरेको छ । बैंकको सेयर रजिस्ट्रार एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।